Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny minisitry ny kolontsaina marolafy dia mandeha maitso mankalaza ny fetin'ny St. Patrick
Androany, mankalaza ny Andron'i St. Patrick ny olona any Kanada sy manerantany. Iray amin'ireo lovantsofina irlandey malaza indrindra, ity festival ity dia mankalaza an'i Saint Patrick, ilay mpiaro an'i Irlandy. Izy io koa dia fizahan-tany sy fizahan-tany ary fizahan-tany manerantany.
Andron'ny Saint Patrick, Na ny Fetin'ny Masindahy Patrick dia fankalazana ara-kolontsaina sy ara-pivavahana natao tamin'ny 17 martsa, daty nahafatesan'i Saint Patrick (c. 385–461 taorian'i Kristy), ny olo-masina mpiaro an'i Irlandy voalohany.
Ny Andron'i Saint Patrick dia natao andro firavoravoana ofisialy kristiana tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-17 ary notandreman'ny fiangonana katolika, ny fiombonambe anglikana (indrindra ny fiangonana irlandey), ny fiangonana ortodoksa atsinanana ary ny fiangonana loterana. Ity andro ity dia fahatsiarovana an'i Saint Patrick sy ny fahatongavan'ny Kristianisma tany Irlandy ary mankalaza ny lova sy ny kolontsain'ny Irlandey amin'ny ankapobeny. Amin'ny ankapobeny ny fankalazana dia misy ny filaharam-be sy ny festival, cèilidhs, ary ny fanaovana akanjo maitso na shamrock. Ny kristiana izay ao amin'ny antokom-pivavahana litorzika dia manatrika fotoam-pivavahana ihany koa[ ary ara-tantara dia nesorina ny fetra amin'ny karemy amin'ny fihinanana sy fisotroana alikaola mandritra ny andro, izay namporisika sy nanaparitaka ny fomban-tsakafo amin'ny alikaola amin'ny fialantsasatra.
Ankalazaina manerana an'i Canada miaraka amin'ny matso sy ny mozika ary ny dihy nentim-paharazana, ny Andron'i St. Patrick dia fotoana iray hanasongadinana ny andraikitra lehibe nananan'ny Kanadiana mihoatra ny 4.5 tapitrisa razambe Irlandey ary manohy milalao ny tantaran'ny firenentsika.
Avy amin'ny toeram-ponenany taloha Terre-Neuve mankany amin'ireo onja fifindra-monina lehibe kokoa ao amin'ny 19th taonjato mandraka androany, ny vehivavy sy ny lehilahy Irlandey dia nanampy betsaka tamin'ny fanaovana Kanada ilay firenena tia mandray olona sy isan-karazany fantatsika ankehitriny. Andao horaisina ity andro ity ho fotoana iray hanehoana ny lova manankarena ananany.
Amin'ny maha-minisitry ny vakoka kanadiana ahy ary minisitra tompon'andraikitra amin'ny kolontsaina marolafy dia manasa ny kanadiana rehetra aho handray anjara amin'ny fankalazana. Tratry ny Fetin'i St Patrick! Lá fhéile Pádraig sona dhaoibh!